05/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Soavimbahoaka : Nandihizan’ny karana ny tanàna
Hagagana ny an’ny besinimaro manoloana ny fahitana ireo andiana teratany karana maro mifamezivezy teny Soavimbahoaka efa ho efatra andro izay, ankilany dia maro ihany koa ireo mpitandro filaminana tazana teny an-toerana manao ny fiambenana. Nahazo …Tohiny
Ambohidranandriana Antsirabe II : Renim-pianakaviana lasan’ny rano
Renim-pianakaviana iray no maty lasan’ny rano tao amin’ny kaominina ambohidranandriana Antsirabe II. Avy niantsena teto Antsirabe ilay ramatoa ny faran’ny herinandro teo, handeha hamonjy no tokantranony no tra-doza ka io nitondra azy tamin’ny fahafatesana io. …Tohiny
Fahazoan-dalana mivarotra zanak’omby : Tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina malagasy
Nitondra fanazavana mahakasika ny lalàna, laharana 22804/2017, ny 12 septambra 2017, izay niraisan’ny minisitera rehetra, ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana, Randriarimanana Harison, mandrara vonjimaika ny fivezivezena, ny varotra ifotony ary ny famonoana ombivavy …Tohiny
« Inona no tiana ahatongavana ? »
Alaim-panahy ihany ny rehetra hametra-panontaniana hoe inona marina no tena ao ambadik’ilay fikambanana Cfoim, ivondronan’ireo karana mizaka ny zom-pirenena frantsay monina eto Madagasikara. Inona no tena tiany ahatongavana amin’ireny « Fanambarana » miendrika fanakianana ny …Tohiny
Ho fampandrosoana ny sehatry ny fanabeazana hatrany, mitohy ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fitsinjovana ny zaza malagasy amin’ny fanomezana azy ireo efitrano fianarana. Manoloana izay indrindra, dia nahazo trano fianarana vaovao, izay ahitana efitrano 4 ...Tohiny